IGuatemala kunye nomceli mngeni wakhe wokufumana indima ye-Academy kuLawulo lweMimandla yeHlabathi- iGeofumadas
Guatemala kunye mngeni yawo ukufumana indima Academy kule Management Territorial
NgoNovemba, 2011 Iiphotography, cadastre, Ukufundisa i-CAD / GIS
ICandelo lezeNzululwazi nobuChwepheshe kwiYunivesithi yaseSan Carlos yaseGuatemala ngumzekelo omhle womsebenzi ekufuneka wenziwe zezi zifundo ukwenza umsebenzi uzinze kwindawo yolawulo lwendawo. Lo ngumsebenzi onzima odla ngokuhamba kancinci, kodwa emva uphononongo endilwenzileyo Kwiminyaka emithathu edlulileyo, kulungile ukwazi inkqubela phambili abayithathayo: phakathi kwezinye izinto zokuqala zokupasa kwabafundi kunye neengqungquthela ezimbini zesithili.
Kulungile ukwazi malunga notsis wokuqala abawubhalileyo kwisiza: Uhlalutyo lokukhula kwedolophu kunye notshintsho kusetyenziso lomhlaba ngexesha le-1960-2006, likwabeka isindululo esisiseko samayunithi omhlaba okungenani koomasipala abane abahlanganisene neQuetzaltenango (Salcaja, I-Olintepeque, iLa Esperanza kunye neSan Mateo).
Isibonelelo semfundo sifumaneka ngoku kwiZiko leDyunivesithi yaseNtshona (i-CUNOC), kodwa oku kulungile kwaye ukuba impembelelo yokuqala yongxowankulu ayithathi mandla afunekayo kwiinkqubo ezinjengale kwiminyaka yayo yokuqala. Ukongeza, ukudibana koomasipala bengingqi kwenza ukuba le misebenzi ibenegalelo kwiimfuno zale ndawo kukuthengiswa kwezolimo, amashishini ezolimo, ubutyebi bendalo nophuhliso, uphuhliso lwasemaphandleni, ulawulo lwendalo kunye nolawulo lomhlaba.
Ubuncinci imisebenzi emithathu ekhuthazwayo liCandelo leSayensi kunye neTekhnoloji:
IAgronomist kwiNkqubo yeMveliso yezoLimo
Injineli yoLawulo lokusiNgqongileyo yendawo
UkuPhononongwa kweTekhnoloji kunye nenjineli yoLawulo loMhlaba
Kwimeko yesithathu, kunye nenye enento yokwenza nomxholo wethu, ijonge ukunika umfundi ithuba lokuziqeqesha ukuze ahlangabezane nengxaki yomhlaba ukusombulula ezobuchwephesha, ezentlalo, ezomthetho kunye nezoqoqosho kunye nokuqinisekisa ukubakho Abasebenzi abakhethekileyo, ukuthatha imisebenzi ebandakanyekileyo kulawulo lwendawo kunye noyilo, ukuphunyezwa nokulawulwa kwemilinganiselo, cadastre, ucwangciso lwendawo, ulawulo lomhlaba, ulawulo lwengcaciso lwendawo kunye nayiphi na enye iprojekthi yophuhliso loluntu. kunye noqoqosho lwesizwe.
Uyilo lwesindululo sekharityhulamu sikwabangelwa luhlalutyo olunzulu lomsebenzi wobuchule bophononongo kumazwe ohlukeneyo ehlabathi, kunye nenguqu yamva nje etshintshe lo msebenzi ngenxa yenkqubela phambili yezobuchwepheshe kunye nokudibana kwezoqoqosho. Oku kugxilwe kubuncinci kwimimandla emine:
Uqeqesho olunika ulwazi olusisiseko lomlinganiso, kwinkcazo yomhlaba womhlaba kwindawo yendawo eyahlukeneyo yezicelo ezinje nge-cadastral, i-agrari kunye nophando lwamahlathi, uxinzelelo lwenethiwekhi.
Inika ulwazi lokuphuhliswa kweempahla zepropathi (real estate) ii-asethi zokuthenga iipropathi (real estate) ekuthatheni inxaxheba kwinxalenye yomzimba kunye noxolelwaniso lwasemthethweni lokucwangciswa kophuhliso olwaneleyo lwelizwe kunye neenjongo ezininzi.
Inzululwazi yokulinganisa kunye noqikelelo loMhlaba kunye nokugqitywa kwendawo yezinto ezikuyo kunye nendawo ejikelezileyo njengomsebenzi wexesha, kunye nokufundwa komgangatho wayo womxhuzulane.
Iifotometmetry kunye nezixhobo ezikude
Indawo yoqeqesho ebonelela ngolwazi lokufumana, ukuqhubekeka, kunye nokuhlalutya ulwazi lwasemhlabeni lweefoto zasemoyeni okanye zomhlaba, kunye nolawulo kunye nokulungiswa kwemifanekiso yedijithali.
Iinkqubo zoLwazi lweJografi kunye neKhathuni
Indawo yoqeqesho evelisa ulwazi ukuba lukwazi ukubonisa kakuhle umphezulu womhlaba ngendlela engangqinelaniyo kunye nedijithali, ukongeza kulungelelaniso lwenombolo okanye ulwazi oluchanekileyo olukhethiweyo kunye noku-odolwa kwindawo yogcino lwedatha, ukuvumela umsebenzi ophakathi kwezwenibanzi.
Inika ulwazi lokuthathwa, ukugcinwa, ukuvavanywa, ukuphuculwa, kolwazi oluninzi olunxulumene nezinto ezisemhlabeni, ekubhekiswa kwinkqubo yokulungelelanisa, kunye nokusetyenziswa kwezixhobo zekhompyuter ezilungiselela ulawulo oludala kunye noludibeneyo, Uhlalutyo kunye nokwenza izigqibo.
Ndifumene ithuba lokwazi kwilizwi loonjingalwazi kunye nabaxhasi bentshukumo, inkqubela phambili ababa nayo, indlela abaxhobisa ngayo iilebhu kunye nezinye zeembono zabo zexesha elizayo. Ndicinga ukuba ngumsebenzi omkhulu lo, nangona kukho imiceli mngeni emininzi ekudaleni iimeko zokuhlangana kwakhona emsebenzini kunye nefuthe lomgaqo-nkqubo wombuso; Yayikukubona isiphithiphithi sabangelwa ngamagosa eRIC phakathi kwabafundi xa baxelelwa ngovuyo ukuba baqinisekisa iingcali zecadaster ngeeyure ezimbalwa zoqeqesho kwaye akukho mfuneko yoqeqesho lwangaphambili.
Kule Intsebenziswano yaseDatshi wenze umsebenzi oncomekayo nge-ITC kunye neNuffic. Okwangoku, kufutshane ne-30 ootitshala sele beqeqeshiwe, uninzi lwabo kwinqanaba leenkosi kunye namakhondo omsebenzi akhona ngokuzinzileyo. Isidingo sokwenza umsebenzi omkhulu wokucwangciswa kunye nokubonakala kwento ephunyeziweyo kuyabonakala; Ukunika imizekelo: upapashe ukuhlelwa kwemephu yentshukumo eyandisiweyo eyunivesithi kwi-intanethi ukuze yaziwe indawo apho iiprojekthi zeklasi nganye zikhoyo, umda kunye neemveliso zazo; Ngale ndlela kuyagcinwa kugcinwa, i-atomization yeenzame iyathintelwa kwaye ulwazi lube luncedo kunemfuno elula.
Owona mzamo ubalulekileyo malunga nokubonakala kwamanye amazwe ngu ICongress yoLawulo loMhlaba, ekucingelwa ukuba uza kukuphumeza rhoqo kwiminyaka emibini umsebenzi odibanisayo phakathi kwamaziko karhulumente, iiarhente zentsebenziswano kunye neenkampani zabucala. Ngaphandle kokusoyika ukungalunganga, ndibona iGuatemala kwindima ebonakalayo kulo mmandla, inamandla angadibaniyo okuqhubela phambili okuqhubela phambili isthmus ukudibanisa iinzame zento esiyifunayo kwaye ingekho mfuneko yokuba iqhutywa ziiprojekthi zamanye amazwe ezinenjongo entle ngamanye amaxesha zibonakala ngathi zinazo Umnqweno wokubeka izibonelelo zemali ezivela e-United States naseYurophu.
Kananjalo isizukulwana esitsha sabafundi abaphumeleleyo sinomceli mngeni onamandla wokwenza umbutho osebenzayo, ongena kwicandelo lezoshishino, iinkonzo zobungcali kunye ne-quagmire yombuso. Logama nje ukuphuculwa korhulumente kunganyanzeliswa kwimithetho enegalelo kwimisebenzi yezolawulo, qho emva kweminyaka emine siyaqhubeka nokubona amasiko afanayo okujongana nezopolitiko, ezona zinto zibalulekileyo zoluntu ziya kubekelwa amashishini abucala okanye zifudukele kwiindawo ezingcono.
Ndiyathemba ukuba kwiminyaka emibini iya kuba neziphumo ezingqinelanayo nethemba lam.
Ulwazi oluninzi lunokufumaneka kwiphepha le Icandelo lezeNzululwazi neTekhnoloji.
Imidyarho engakumbi yeCUNOC
Post edlulileyo«Edlulileyo Imiba encinane kakhulu technical Congress Agrimensura
Post Next Geofumed ... ngokoqobo kwi-flyOkulandelayo "